Sawirro: Shariif Xassan iyo Axmed Madoobe oo isku fahmi waayay qorshihii wada hadalkooda | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Shariif Xassan iyo Axmed Madoobe oo isku fahmi waayay qorshihii wada...
Sawirro: Shariif Xassan iyo Axmed Madoobe oo isku fahmi waayay qorshihii wada hadalkooda
Muqdisho (Caasimada Online)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Somalia Cumar Cabdirashiid Cali ayaa maanta shir magaalada Muqdisho uga furay Madaxweynayaasha Maamulada Koofur Galbeed iyo Jubbadland Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Axmed Madoobe.
Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan labada Gole ee DFS.
Ra’isul wasaare Cumar ayaa sheegay in Ujeedka shirka uu yahay in xal laga dhex abuuro labada madaxweyne oo mudooyinkii ugu danbeeyay ku kala tagay Siyaasada Somalia.
Kulanka ayaa waxa uu maanta ka furmay Garoonka Aadan Cadde waxaana jira in labada madaxweyne ay isku fahmi waayen Shirka, islamarkaana ay ku kala booden, iyadoo markii danbe Ra’isul wasaare Cumar uu dib ugu soo celshay Hoolka uu shirka ka socday labadaasi mas’uul.
Shariif Xassan ayaa ku doodaaya in Axmed Madoobe uu faragalin qaawan ku hayo howlaha maamulkiisa islamarkaana xiliyada uu carqalad la doonaayo Koonfur Galbeed uu usoo adeegsado Hogaamiyaha Maamulka Puntland.
Shariif Xassan waxa uu sidoo kale sheegay in dhacdadii ugu danbeysay ay aheyn dhismaha maamulka Bakool Sare oo uu sheegay in Axmed Madoobe uu ka danbeeyay isaga oo Xildhibaano ka tirsan BFS u adeegsanaaya.
Shariif Xassan waxa uu kulanka kusoo bandhigay qodobo farabadan oo ay kamid tahay in Axmed Madoobe uu carqalad iyo war xumo tashiil ka dhex abuuray Koonfur Galbeed iyo Dowlada Ethiopia, hayeeshee taasina ay tahay mida ugu weyn ee Shariif Xassan uu ka qeyla dhaamiyay.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in Maamulka Koonfur Galbeed uu weerar ku yahay Siyaasada Jubbland iyo in Shariif Xassan uu taabagalinaayo Mucaaradka Jubbaland.
Axmed Madoobe waxa uu cadeeyay in Jubbaland ay ka socon la’ dahay Shirqoolo uu u maleegay Shariif Xassan taasina ay tahay tan ku qasabtay carqaladeynta Koonfur Galbeed.
Isfahan waaga ka sokoow Shariif Xassan waxa uu ballanqaaday in shirka Kismaayo uu ka qeybgali doono balse uu u baahan yahay in Axmed Madoobe uu kala xaajoodo cilada taagan.
Wax natiijo ah wali lagama gaarin shirka oo hadda kusoo xirmay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana lasoo warinayaa in Axmed Madoobe uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo, inkastoo aan la xaqiijinkarin laabashadiisa.